Usizo oluphuthumayo lwabagibeli beBolt
Konke odinga ukukwazi ukusebenzisa inkinobho ye-Emergency SOS ngaphakathi kweThuluzi Lokuphepha kuhlelo lokusebenza lomgibeli weBolt
Inkinobho ye-Emergency SOS ivumela abagibeli beBolt ukuthi bathumele isexwayiso sesikhathi sangempela esikhungweni sikazwelonke sokuphendula ngezimo eziphuthumayo eNamola esimweni esingavamile sesimo esiphuthumayo noma sesehlakalo ngesikhathi sohambo lweBolt. Uma seyenziwe yasebenza, ukwakheka nemodeli yeBolt yemoto, ipuleti lelayisense, indawo yokuhlala kanye nolwazi lokuhamba kuzokwabelwa opharetha we-Namola Response Center ozinikele ozokuxhumanisa nosizo oluphuthumayo esikhundleni sakho.
Inkinobho ethi "Emergency SOS" itholakala kumgibeli wakho we- "Safety Tool Kit". Ukufinyelela ku- “Safety Tool Kit”:
Thepha kusithonjana se-green shield ezansi kwesokudla sohlelo lwakho lokusebenza Bolt Rider app.
Thepha "Emergency help"
Isikrini sizovela ngenkinobho ebomvu "ye-Emergency SOS". Ukuthumela isexwayiso esiphuthumayo ekamelweni lokulawula laseNamola kampompi "Emergency SOS"
Uma utshelwa nge- "Request Emergency", thepha okuthi "Continue".
Lokhu kuzothumela isexwayiso egumbini lokulawula laseNamola.
Uyacelwa uqaphele: Opharetha weSikhungo Sokuphendula uzokushayela ukuze uqinisekise isimo sakho esiphuthumayo. Phendula ifoni yakho ngemuva kokucindezela inkinobho "ye-Emergency SOS"
Uma ungakwazi ukukhuluma, phendula ucingo ukuze opharetha ezwe ukuthi kwenzekani ngemuv
Uma ukwazi ukukhuluma, sicela wabelane ngomhlinzeki ngemininingwane yesimo sakho esiphuthumayo. Opharetha uzoba nemininingwane yemoto okuyo, kanye nemininingwane yohambo lwakho. Bazokwabelana ngalokhu noMphenduli Ohlomile, abazomthumela endaweni yakho uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo
Ithiphu: Ngaphandle kokuthi unikeze iBolt ukufinyelela kundawo yakho "njalo" - gcina uhlelo lwakho lokusebenza luvulekile ukuqinisekisa ukubuyekezwa kwendawo yakho
Kwenzekani uma ngingakwazi ukuphendula ifoni yami ngemuva kokuthi ngisebenzise i-Emergency SOS?
Abagibeli kufanele benze konke okusemandleni ukuphendula izingcingo zabo ngemuva kokuvula inkinobho ye-Emergency SOS. Ngeluleka abagibeli ukuthi basebenzise inkinobho ye-Emergency SOS - uma uzizwa ungaphephile, sicela ucele usizo oluphuthumayo. Uma ungakwazi ukuphendula ifoni yakho, i-Namola Operator izobheka ukuthi ngabe usaqhubeka yini nokuhamba ngeBolt. Uma uphuma enkambweni lapho bazothumela umphenduli ohlomile endaweni yakho.
Kufanele ngicindezele nini inkinobho ye-Emergency SOS?
Njengomgibeli weBolt, kufanele ucindezele inkinobho ye-Emergency SOS uma uzwa ukuthi usesimweni esisongelayo ngenkathi usohambeni lweBolt noma uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo ngenkathi usohambeni lweBolt, njengengozi yemoto.
Ubani ozofika azongisiza esimeni sami esiphuthumayo?
UMphenduli Ohlomile uzokusiza uma kwenzeka impilo yakho noma impahla yakho isongelwa ngenkathi usohambweni lweBolt. INamola futhi ingathumela abaPhenduli Bomphakathi kuwe uma kwenzeka kunezinye izimo eziphuthumayo ongahlangabezana nazo ngenkathi ugibela iBolt, njengamaphoyisa kamasipala noma i-ambulensi yomphakathi uma kwenzeka ingozi yemoto.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi Impendulo Yezikhali ifike kimi esimeni esiphuthumayo?
Lokhu kuncike ezintweni eziningi, kepha umphenduli ohlomile oseduze endaweni yakho ebukhoma uzokwaziswa. Umphenduli Ohlomile kufanele afike kuwe ngaphansi kwemizuzu engu-15 uma usendaweni enkulu yedolobha.
Ngabe isexwayiso se-SOS Emergency sizocushwa uma umshayeli wami ephuma endleleni?
Njengamanje, ukuphela kwendlela isikhungo sempendulo yezimo eziphuthumayo saseNamola esizothola isexwayiso esiphuthumayo kuwe uma ucindezela inkinobho ye-Emergency SOS ngaphakathi kohlelo lokusebenza lomgibeli weBolt. Sikukwazisa ukuthi uhlale uqaphile phakathi nohambo lwakho lweBolt. Uma uzwa sengathi "uphuma emgudwini" qalisa inkinobho yakho ye-Emergency SOS.
Ngabe umshayeli uzokwaziswa ukuthi ngithumele isaziso esiphuthumayo lapho ngicindezela inkinobho ye-SOS Emergency?
Cha. Isikhungo Sokuphendula Esiphuthumayo saseNamola kuphela esizokwaziswa kanye noMphenduli Ohlomile ozofika endaweni yakho azokusiza.
Angikwazi ukubona isithonjana se-green shield kuhlelo lwami lwe-Bolt.
Ithuluzi Lokuphepha Lakho (uphawu lwesihlangu esiluhlaza) lizovela kuphela uma usohambeni. Uma usohambweni futhi ungasiboni isithonjana se-green shield, sicela uxhumane neBolt ngethebhu yokuxhaswa yangaphakathi nohlelo.
Sicela wazi ukuthi ukufinyelela kwi-Armed Response esimweni esiphuthumayo kutholakala kuphela ngenkathi usohambweni lweBolt uma ungathanda ukufinyelela kwi-Armed Response noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi, sicela "ulande i-Namola App" futhi "uthuthukele ku-Namola Plus"
Kuthiwani uma ngizizwa ngingaphephile ngenkathi ngilinde umshayeli ngisengacela usizo?
Uzokwazi ukufinyelela inkinobho ye-Emergency SOS kuphela lapho usohambweni lweBolt. Kunalokho linda ngaphakathi kuze kufike umshayeli wakho weBolt. Kodwa-ke, uma lokhu kungeyona inketho, qiniseka ukuthi unohlelo lokusebenza lwe "Namola oluphuthumayo" ukuthola usizo.
Uma ngabelana ngemininingwane yami yokugibela, ingabe engibathandayo bazokwazi ukungicelela usizo?
Ukwabelana ngendawo yakho yohambo nabantu obathandayo kungumbono omuhle futhi kungenziwa kalula ngeThuluzi Lokuphepha Lokuphepha. Kodwa-ke, obathandayo ngeke bakwazi ukucela usizo ngokuzenzakalela ngohlelo lokusebenza lweBolt uma bekubona uphambukile. Qiniseka ukuthi unake okukuzungezile futhi ucela usizo ngenkinobho ye-Emergency SOS uma uzizwa sengathi usesimweni esisongelayo.